Isbedel lagu sameeynayo goobaha lagu meeydho ee iskuullada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Meelaha lagu maaydho sawir: HENRIK MONTGOMERY / TT
Isbedel lagu sameeynayo goobaha lagu meeydho ee iskuullada
Noella Stenberg: waa aan isdhextaanayn marka aan maydhanayno.
La daabacay torsdag 4 januari kl 10.59
Iskuullo badan ayaa dib u habeeyn ku sameeyey meelaha ardeydu ku maydhato ka dib xiisadaha ciyaaraha.
Raadiyaha Sweden oo hore baadhitaan uu sameeyey sanad ka hor ku ogaaday in 60 boqolkiiba ardeyda iskuulada dhexe aanay maydhan ka dib xiisadda ciyaaraha. Sababta ayaa ah cabsi ay ka qabaan in ay jidhkooda ku muujiyaan meelaha ardeyda kale arkayaan, iyada oo ay yaraayeen fursadaha ah in ardeygu uu meel keligii ku maydho. Raadiyaha Sweden oo mar kale la xidhiidhay iskuuladdii horey baadhitaankan uga qeeyb qaatay ayaa ogaaday in iskuullo badan ay hada isbedel ku sameeyeen meelaha lagu maydho.
Iskuulka Ängarydsskolan oo ku yaala magaalada Tranås ayaa ka mid ah iskuulladda wax ka bedelka ku sameeyey goobaha lagu maydho. Noella Stenberg oo ka mid ah ardeyda dhigata iskuulkan ayaa ka mid ah ardeyddii ka hawlgalay in dib u habeeyn lagu sameeyo gobahan. Waxanay raadiyaha Sweden u sheegtay in ay ardey badan hada maaydhaan marka ay ciyaaraha ka soo baxaan.
-Waan wada taagnayn, marka qofku leeyahay caadada waxa laga yaabaa in aanu doonayn in uu meesha ku maydho. Waayo waxa ay u arkayeen in ay baqdin leedahay. Ka dib waxan helnay gidaaro markaas oo qof kastaa meeshiisa istaagayo, hadana waxa la sameeyey daahyo markan xitaa laysma arkaayo, ayey sheegtay Stenberg.
Fredrik Bohlin waa maamulaha iskuulka Ängarydsskolan, waxaanu sheegay inay muuhimad siiyeen wax ka qabadka cabashada ardeyda ee arrintan ku aadan.
-Waxaan rajeeynayaa in markii horebada la maaydhan jiray, balse markan ay yaraatay cabsida laga qabo in wax laga sheego qofka. Taas weeyaan
faa'iidada ugu weyn, ayuu sheegay Bohlin.